ह्ट अवतारमा स्विमिङ पूलमा सुष्मा - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०६, २०७६ समय: १०:१९:१३
नायिका सुष्मा कार्कीको व्यस्तता हिजोआज चलचित्रमा कम देखिन्छ । सुष्मा चलचित्रमा कम, विदेश कार्यक्रममा बढी व्यस्त छिन् । चलचित्र क्षेत्रमा राम्रै संभावना हुँदा हुँदै पनि सुष्माले गतिलो चलचित्र रोज्न जानिन् । यसैले पनि उनको करिअर अहिले सुखद छैन । सुष्माका केही चलचित्र रिलिजको क्रममा छन् । त्यो बाहेक उनको हातमा नयाँ चलचित्र छैन ।
सुष्मा गर्मी लागेसँगै स्विमिङ पूलमा खुबै रमाउने गर्छिन् । केही समय अगाडि उनी हायात होटलमा रातो विकिनीमा देखिएकी थिइन् । यसपटक, उनी होटल हिमालयमा स्विमिङ पहिरनमा हट देखिएकी छिन् । सुष्मा स्विमिङ पूलमा विन्दास देखिएकी छिन् ।
हुनत, सुष्मा कुनै समय हट आइटम नृत्यका कारण खुबै चर्चामा रहन्थिन् । उनको, हट छवि चलचित्रमा गरेको आइटम गरेका कारणले पनि बनेको हो । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनी हट पहिरन लगाउन पछि पर्दिनन् ।
अनुष्का शर्माको बोल्ड फोटोशूट सामाजिक सञ्जालमा (फोटो फिचर)
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर्दामा देखिएकी छैनिन् । तर, उनी कुनै न कुनै माध्यमबाट फ्यानसँग नजिक भइरहन्छिन् । यतिबेला ...
कुखुराले चल्ला जन्माएपछि
अण्डा पहिले कि कुखुरा ? यो बहस कहिल्यै टुंगिँदैन । तर यो चाहीँ सत्य हो कि कुखुराले अण्डा पार्दछ र अण्डाबाटै चल्ला कोरलिए...
के हङकङबाट हटला टिकटक ?
चिनियाँ सर्ट भिडियो एप टिकटकले अबको केही दिनमा हङकङमा आफ्नो सेवा बन्द गर्ने बताएको छ । चीनले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानु...
युवकको शरीरमा ६० हजार माहुरी
भारतको केरलाका एकजना युवकले आफ्नो शरीरमा ६० हजार माहुरीलाई ४ घण्टासम्म बसालेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । नेचर एमएस...
छोरीको बिहेमा दाइजो : २१ वटा विषालु सर्प !
नेपालमा चेपाङ जातिको बिहेमा छोरीलाई चिउरीको बोट दाइजो दिने चलन छ । केही आदिवासी जनजातिहरुमा बिहे गरेर घर पठाएकी छोरीलाई ...